Une imoto kanye nengane? Yini okudingeka uyicabangele kwasekuqaleni? Yiqiniso, ukuthi kufanele uthenge isihlalo emotweni. Siger ikhambi ephelele kubashayeli nezingane. Cabangela izici zayo.
Car esihlalweni Siger - olukhulu ingane
Ezimakethe Russian imikhiqizo yalesi inkampani baba emuva ethandwa ngo-2001. Nokho, ngaleso sikhathi inani emphahleni uphansi impela. Noma kunjalo, ngo-2008 kwaba khona into entsha - car isihlalo Siger. ukuthuthukiswa abahlukile design, izixazululo ezintsha - konke lokhu isetshenziswa ukudala mikhiqizo. Car esihlalweni Siger bazobe sebecela ukuthi nengane yakho. Lokhu kungokwemvelo, ngoba isisindo zako umuntu akakwazi bahlala banganandaba.
Omunye izinzuzo esihlalweni possessed Siger, ukusebenzisa e womshini yayo i extrusion igalelo udini ubuchwepheshe. Uhlelo okuzenzakalelayo ikuvumela ukulawula ngokugcwele ukukhululwa kwe-imikhiqizo siphelile.
Kungenze ngamunye izakhi lezihlalo imoto ngezinto izinga okusezingeni kuphela. Ukuze ezithambile nesembozo esikhiphekayo, isibonelo, usebenzisa Friend, hypoallergenic, nemihuzuko knitwear ukumelana. Kuyefana nasendleleni ukugcwaliswa yangaphakathi.
Kafushane, Siger ingane imoto izihlalo bengumsebenzi esiyingqayizivele ongenawo analogue emncintiswaneni. uhla yabo olusha njalo. Ikhwalithi Liyindawo okusezingeni eliphezulu. Ukuphepha nenduduzo abagibeli ebekelwa encane, ngisho uhambo sasivumela eside. Ngamunye esihlalweni Ukukhishwa ukumelana ethile ukuhlolwa futhi elihlangabezana nazo zonke amazinga yaseYurophu. Phela, inkampani osekuzuziwe akuvimbi, ngoba zonke izinsuku buyaqhubeka nokukhula kanye nokuthuthuka. Izinhlobonhlobo okwandisa ongakhetha livela njalo ngonyaka emakethe namuhla.
"Cocoon" - omunye onobuhle ethandwa kakhulu
Kwamanye onobuhle ayeke lapho ukhetha izihlalo imoto? Ububanzi kuyinto ngempela ezibanzi. Car esihlalweni Siger "Cocoon" ingenye models ethandwa kakhulu. Yenzelwe amaqembu wobudala lokuqala nelesibili - okungukuthi, izingane kusukela ngonyaka 1 iminyaka engu-7.
Le modeli libhekene inhlanganisela izinga okusezingeni futhi intengo ayibizi kakhulu, ngakho ilungele labo abafuna ukwakha ingane yakho nenduduzo esiphezulu ngesikhathi ugibele imoto ngaphandle kwezindleko.
Car esihlalweni iphindwa kahle umzimba wabuka sibonga sengane Uhlaka wamathambo. icala Soft ivumela ukuthola ukhululekile, ngisho ukuthatha isihlwathi ohambweni. Deep headrest ukhululekile kungaphazamisi ubuthongo wengane ngesikhathi cornering abukhali nokuhlale unyathela amabhuleki. Futhi Izibuyekezo umthengi ukuqinisekisa lokhu.
"Drayivu" - imoto isihlalo uhambo olude
Kunenye imodeli zithandwa kakhulu. Lokhu isihlalo imoto Siger "-Drive." It yenzelwe izingane kusukela ngonyaka 1 iminyaka engu-10. Model elihlangabezana nazo zonke iziqondiso wamanje kanye namazinga. It yakhelwe ikhumbula zonke izici ingane umzimba. Ngakho, imvuthuluka kuyoba ukhululekile ngisho ukuhamba amabanga amade.
Isihlalo aboshelwe imoto ngokushesha futhi ngokuphepha. Kulesi pipsqueak kuphephile ngokuphelele hhayi kuphela ngaphansi unyathela amabhuleki kanzima, kodwa futhi ngoba izingozi kungenzeka, ngenxa ibhande emihlanu-phuzu. By endleleni, it kungase kushintshwe izikhundla ezimbili. Okungukuthi, umntwana kuyoba ukhululekile e izingubo zasehlobo, kanye ebusika.
ikhava Car esihlalweni okuhlala isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, kulula kakhulu ukuba asuse okugeza ngokuzenzekelayo noma mathupha. Ukwahlulela ngokubukeka ukubuyekezwa yabathengi, indaba akabi, akusho shwabanisa, kuba hypoallergenic. Ngamafuphi, le model - kukho olukhulu abanikazi imoto izingane. Awukwazi singabaze impumelelo ukuthenga ezinjalo.
"Cosmo" - isihlalo bobudala
Uma udinga ukuthenga imodeli ukusetshenziswa eside, banake ukhetho olulandelayo. Siger imoto esihlalweni "Cosmo" ivumela izingane kusukela ezinyangeni 9 iminyaka engu-12.
Amanani nezobuchwepheshe izici, nahlulele by ukubuyekezwa, amakhasimende emangalisayo elimnandi. Isihlalo wanika ithuba lokuwina ukuqashelwa abazali abaningi. izihlalo Wamathambo Ngakho wenza ngokuhambisana nokwakheka komzimba, njengoba kwezinye onobuhle, kuhambeke "Cosmo" kuyoba ekahle kakhulu.
Isihlalo headrest kuyinto adjustable ukuphakama, futhi izintambo zangaphakathi uvumele ukulungisa isikhundla ingane ngokuvumelana ukukhula kwakhe. I backrest kungenziwa aboshelwe izikhundla ezintathu, okungukuthi, uzokwazi ukuba athwale imvuthu kule sikhundla ukhululekile kakhulu kuye. Uma wayefisa, amabhande kungaba unfasten futhi asuse backrest.
Ngokuvamile, "Cosmo" - yilokhu kanye mhla ludingeka nalabo bazali abangafuni ukuchitha imali njalo onobuhle ezintsha. esihlalweni Eliphezulu uyosindisa, kodwa eyokusiza isikhathi eside. Zaphendukela ekucwaningeni Kule mikhiqizo, Kuyoba Noma ngabe yikuphi awukwazi uhambe okungalungile. Lena Ukukhetha efanele umshayeli. Umnikazi, kanye nengane yakhe, ubona ikakhulu izinzuzo.
Secure futhi enokwethenjelwa emotweni esihlalweni
Kukhona Yiqiniso, namanje eziningi nezinye onobuhle Siger esihlalweni: .. "Ukulekelela", "Prime", "Nautilus", "Smart", njll Noma kunjalo, zonke sihlanganise izinzuzo main: Uhlaka wamathambo ezijulile, ohlangothini sithuthukiswe Ukuvikelwa, ukhululekile futhi lwemidlalo obusebenzayo izihlalo njalo, ukuphakama-adjustable. Ngaphezu kwalokho, lezi izihlalo imoto sivumelane nazo zonke izimfuneko we yaseYurophu.
Kunoma ikuphi, kungakhathaliseki ukuthi imodeli ukhetha, qiniseka ukuthenga omunye wabo - kungcono isinqumo esifanele. Ingane bayokujabulela ukuya nawe ku uhambo, ukuzizwa ekhululekile futhi iphephile. Futhi, okubaluleke, isitulo uyokhonza abanikazi bayo ezincane iminyaka eminingi.
Ngokuthenga nesisekeli, umnikazi imoto kwenza kube lula kuwe ngokwakho. Lokhu akusona isimanga, ngoba eziningi izinkinga ezivelayo lapho ehamba ngemoto, baye nje selikhohliwe. Ngakho, noma iyiphi uhambo kuzodluliselwa lula kakhulu, ngize ngibe kujabulise kakhudlwana kokubili ingane futhi abazali bakhe. Ngamafuphi, uma uvame ukuba uthole ngemuva kwesondo futhi une ukuthatha ingane, ngaphandle ezinhle, isihlalo ukhululekile ongakwazi ukuzenza.
Yesimanjemanje temibhalo lokho akukaze
Kuthiwani uma kungekho isikhwehlela isuka? Uyini isikhwehlela? Isikhwehlela e abadala, ingane: izimbangela, umbala